१६ कम्पनी आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा,इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओ माघ २ गतेदेखि
२९ पुष, काठमडौं । सेयर बजारमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा चन्द्रागिरि हिल्सको आवेदन दिनेको संख्याबाटपनि थाहापाउन सकिन्छ । यो कम्पनीको लागि १२ लाख ५० हजार भन्दाबढिले आवेदन दिएका छन् ।
सेयर बजारमा लगानिकर्ताहरुको अकर्षण बढेको अर्को उदाहरणको रुपमा डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्यामा आएको उल्लेख्य बृद्धिबाट पनि थाहापाउन सकिन्छ । मंसिर १७ गतेसम्म २२ लाखले डिम्याट खाता खोलेकामा हाल त्यो संंख्या बढेर २४ लाख ८७ हजार पुगेका छन्।
सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुको लागि माघ २ गतेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आइपिओ खुलाउदै छ । बैंकले ८ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गर्न लागेको छ । लगानीकर्ताहरुले सायदनै यो र्बैकबाट खालि हात रहनुपर्ने छैन् ।
त्यस्तै, दोलखा जिल्लामा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सिंगटी हाइड्रोपावर इनर्जीले पनि आइपिओ निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट स्वविकृति पाइसकेको छ। कम्पनीले अंकित मूल्यमा ४३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गर्न अनुमति पाएको छ।
यसका साथै धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा हाल १६ कम्पनीहरु रहेका छन्। ती कम्पनीहरु २ अर्ब ४ करोड २९ लाख ६३ हजार ८२० बराबरो २० करोड ३४ लाख ८ हजार ९७ कित्ता सेयर निश्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेका १६ कम्पनीहरु,
टेलिकमले दिँदैछ शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई ५ जीबी डाटा र भ्वाइससहितको निःशुल्क सिम
९ माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक…
सामुदायिक लघुवित्त संस्थाले सेयरधनीहरुलाई बनायो निराश
९ माघ, काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्ना…
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, कति छ त आजको बजार भाउ ?
मञ्जुश्री फाईनान्सले ५० करोड बराबरको ऋणपत्र खुला गर्दै
चन्द्रागिरि हिल्सको आईपो बाँडफाँट, तपाईलाई पर्‍याे कि परेन ?
नेपाल इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश घोषणा, शेयरधनीहरुले पाउने भए ८ प्रतिशत बोनस